Ungayi-oda kanjani inguqulo ephelele yomkhiqizo? - DataNumen
Ngomkhiqizo ngamunye, kunenguqulo yedemo yamahhala, engalandwa ekhasini eliyisiqalo lomkhiqizo ngokuchofoza i- "U-downloader mahhala" inkinobho.
Uhlobo lwedemo luzojwayelekile HHAYI khipha ifayili elihleliwe, noma ubeke ukulinganiselwa okuthile kufayela elilungisiwe. Ukuthola ifayili noma ukuqeda ukulinganiselwa, udinga ukuchofoza ifayela le- "Thenga Manje" inkinobho oda okufushane umnyuziki.
Samukela wonke amakhadi amakhulu esikweletu, Maestro (UK), giropay (Germany), iDEAL (Netherlands), Bank / Wire transfer, WebMoney, oda Thenga, PayPal, amasheke, Direct Debit kanye Ama-oda Wefeksi / Wefoni.
Uma inkampani noma isikhungo sakho sinentshisekelo ekunikezeni umkhiqizo wethu amalayisense wabasebenzisi abaningana, ungathola isaphulelo sevolumu bese ugcine imali eningi ngokuthenga amalayisense amaningi ndawonye.
buy, inguqulo yedemo, okufushane umnyuziki, Oda, ukuthenga
Kubuyekezwe ngoMeyi 13, 2021